Nguva yechando zviitiko | Shanyira Hultsfred
Skiing, sledding kana kuvaka murume wechando?
Kana chando chakamirirwa kwenguva refu chikagara pasi, pane zvakawanda zvingasarudzwa zvezviitiko zvechando.
Hagadal's cross-country ski trail
Pfupisa njanji yemwenje yemagetsi
Dackeslingan iri padyo neski slope Dackestupet. Nzira yacho inoyera huwandu hunosvika makiromita 1,2 nekukwira kuri nyore uye kwakaoma zvishoma. Iyo track inoitwa zvachose isina purofiti
MuSilverdalen iwe unowana iyo giraidhi gomba chikomo. Ongororo
Munharaunda ye "Slätten" iri pakati peHultsfred uchawana Slättenbacken, chikomo chidiki uye chakarurama. Kune zvakare nzvimbo yekubheka uye magetsi.
Yakareba gomo iro rakadzika kwazvo. Pano pane bhengi nzvimbo uye magetsi. Chikomo chiri nyore kusvika nemotokari.
Yedzidzo kosi muSilverdalen. Sangano rinotungamira ndere IF IF Hebe. Iko pamusoro penzvimbo iri 110 x 65 m.Pane maviri ekuchinja makamuri muhoro yemitambo uye nzvimbo yepamusoro
Nzvimbo yakatenuka yemvura iri muJärnforsen, ingangoita mazana maviri nemakumi mashanu emamita pakureba nedonhwe remamita makumi matatu. Mheni inowanikwa.
Hesjöbacken chikomo chakadzika chiri padyo neMarailla neHesjön. Kupaka mota kunowanikwa pakutanga kwegomo. Mheni uye bhengi nzvimbo inowanikwa.